Unganidzo yemasaini ekuvandudza madhiraivha e AMD | Kubva kuLinux
Siginecha yekuunganidza yekuvandudza madhiraivha e AMD
Vazhinji vedu vashandisi vakaodzwa mwoyo neyekupedzisira nhaka 12.6 mutyairi uyo wakaburitswa makadhi edu emifananidzo, matambudziko atakakumbira kuti agadziriswe haana kugadziriswa uye makadhi edu akamiswa, mune chimwe chinhu chandinosheedzera, kutuka mutengi uye AMD mutengi.
Ini ndinofunga sevashandisi ve AMD uye vatengi isu tinofanirwa kuremekedzwa zvakanyanya, isu tinokodzera turakiti iri nani kubva kukambani, nekuda kwechikonzero ichi, ini ndagadzira chikumbiro chandinoisa pasi apa, chikumbiro chandinotarisira kuti vanhu vazhinji vanogona kusaina uye kuti kana tinosvika 150 masiginecha, ndinoronga kutumira AMD. Kuti usayine, chingotumira email ku markurujapan@gmail.com rine zita rako uye surname uye nyika yaunogara.
Ndiri kutarisira kutora chikamu chikuru.
Gentlemen we AMD, sevashandisi veGNU / Linux system inoshanda, sevashandisi ve desktop, avo vakashandisa mari yavo uye vanovimba nemi, vatenga makadhi emifananidzo kubva kuRadeon hd4000, 3000 na2000 nhevedzano, tinoda kuratidza yedu kusagutsikana nemamiriro azvino eva radeon anokonzeresa vatyairi, ayo akamiswa asina kana kugadzirisa zvikanganiso zvese zvavainazvo parizvino. Sevashandisi nevatengi, tinokumbira kuti mutyairi wemakadhi edu emifananidzo agadziriswe, kuti zviputi zviripo (kubvarura mukutamba neopengl kuburitswa, hapana gpu yekumhanyisa mu chrome uye firefox, kusashanda 2d kuita, kubvarura mukutamba ne xvba, kunonoka kuita ne compiz uye kwin) zvakagadziriswa.
Pachokwadi, ini nevamwe vazhinji veGnu / Linux vashandisi tinosaina chikumbiro ichi.
Iye zvino unogona kuvhota kubva change.org kubva iyi link nenzira yakachengeteka. Ndokumbirawo kuti murambe muchitsigira chikonzero.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » GNU / Linux » Siginecha yekuunganidza yekuvandudza madhiraivha e AMD
zviri nyore kutenga nvidia.
uyezve, iyo '4 hd08xxx haisisiri kutsigirwa, zvichienzaniswa neiyo '6 geforce 04xxx iyo ichiri kutsigirwa nevatyairi vemazuva ano.
asi ndicharamba ndichabatana nechikumbiro chako
Ini pachangu, handina kumbobvira ndakurudzira / kutenga AMD / Ati chaizvo nekuda kwenyaya yekutsigira, asi chinhu chimwe hachibvise chimwe, ndosaka uchifanira kusaina, kuti uwane dzimwe nzira dzekusarudza kubva.
Saka kana rutsigiro rwakawanda danho rauinaro, mukana wekuzadzikisa chinangwa, kuyedza kuita kudaro hakurwadzi uye kunogona kubatsira kune wese munhu.
Zviri nyore kwazvo kutaura kune avo vane desktop, asi iwo makadhi ese masango uye isu tinoda vatyairi vari nani veLinux kubva ku AMD
Ngatione kuti chikumbiro chinoshanda sei, hapana kurwa kwakaipisisa kupfuura iyo isingaitwe.
Ini ndinobatana nechikumbiro chako, asi yeuka kuti nzira yakanakisa yekuratidza kusagutsikana kwedu nechigadzirwa kusatenge uye nekukurudzira kuti vamwe vasatenge.
Anopfuura mumwe chete AMD / ATi mukuru anofanira kunge akadhindisa chikumbiro pabepa repachimbuzi.
Nedhiraivhu yekutengesa, ndakave nedambudziko rekuda kuziva kuti harivate kana kumisa muVision E2 (HD 6320), uye mutyairi wemahara anoshandisa simba rakawanda uye anoparadza kupisa.
Une siginecha yangu
David Yeshael Naranjo Sanchez akadaro
Ini ndinofunga zvaunofunga ndezvechokwadi asi ndinokurudzira kuti uwane mamwe masiginecha sezvo masiginecha zana nemakumi mashoma asina basa
Pindura kuna David Yeshael Naranjo Sanchez
Zvakadaro, AMD ndicho chinhu chakasimba kwazvo chaunogona kuwana icho chinoshanda nemadhiraivha emahara. Uye ndezvekuti kunyangwe Intel iine yakanakisa madhiraivha, mashandiro emachipisi ayo haafananidzi neRadeon kana GeForce. Uye kune rimwe divi nVidia yakavhurwa sosi yekutsigira inoseka (haipo).
Ini ndinotsigira chirongwa ichi, nekuti ini ndinotenda kuti AMD iri padyo nenzvimbo yakavhurika sosi nharaunda, ichienzaniswa nVidia.
Mhinduro yakanakisa uye chiyero chekumanikidza kurwisa zvigadzirwa zve AMD / ATI hakusi kuzvitenga, kana masiginecha kana mukaka ...
Ndanga ndichiita chiyero ichi chemanikidza kubva 2005 uye Patsvene Isita.
Asi iwe unonditsigira mutsika…. 😉
Chokwadi, hauvatenge uye zvozodii? Kuti ivo havana basa, isu hatisi gumi muzana pamusika wavo wekutengesa ..., zvishoma zvavanotengesa pamusoro pazvo uye madhiraivha mashoma avachaita, nekuti ivo vanozokwanisa kutaura, ndiye kuti hapana munhu anoshandisa Linux anotenga zvigadzirwa zvedu
Ichokwadi kuti GNU / Linux haina huwandu hwakakwana hweperesenti yevashandisi kukumbira kune vagadziri sezvaunotaura, asi iwe unogona kuzviita zvese. Ini handitenge magiraidhi eATI futi, asi ndinenge ndichinyorera kuchikumbiro nekuti ndinoziva kuti kune vamwe vashandisi vanoda vatyairi vari nani. AMD ingaziva sei kuti ndinoshandisa Nvidia? uye ndinofungawo kuti zvinogara zvirinani kuva nesarudzo dzasara, nekuti nekuwedzera ivo vaizosiya ratidziro iri nani kune avo, vane iwo magirafu, vanosarudza kutamira kuLinux.
Ini ndinotsigira chikumbiro ini ndine radeon hd 4670 yakanamatira mu ubuntu 12.04 nekuti ini handigone kushandisa madhiraivhu mu ubuntu 12.10
Isu takafanana, dambudziko iri rinonditadzisa kubva pakushandura distro yangu kuenda kune imwe yakaita fedora kana archlinux. Neraki Ubuntu 12.04 iri LST.
Kana ivo vasiri kuzoburitsa sosi kodhi yevatyairi vavo, zvirinani vanovaita vagone kuita uye nekuvapa rutsigiro.
Asi zvichiri zvisina kunaka kuti vanhu ve AMD havafunge nezvevatengi vavo.
€ quiman akadaro
Hazvisi nani here kuita muunganidzwa wemasaini edhijitari?
Pane webhusaiti yepamhepo?
Kana inofanirwa kunge iri gwaro rekunyama?
Pindura kuna € quiman
Zvingave zvakanaka asi ini handizive chero webhusaiti inovimbika ichi, iwe unoziva chero?
Ndangoitumira haikona kubuda. Kana ikabuda kaviri ndinokumbira ruregerero kuna maadmin nedambudziko rekudzima
Zvisinei, 150 masiginecha anoita kunge mashoma kwandiri. Ini ndinofunga inofanirwa kuve iri nhamba inomiririra.
Kune akawanda ... iwe unorevei neinishuwarenzi?
Kuti iyo data haina kuburitswa kana kuti maemail anoshandiswa SPAM?
Kana zvirizvo ... saka unogona kuseta fomu yegoogle iri nyore kwazvo kuita muGoogle Drive.
Nditumire email uye tigoona kuti tinozviita sei :), kana iwe uchikwanisa kundibatsira, iwe unenge uri wekubatsira kukuru.
tarisa tb pane izvi, tb ingave yakanaka.
Kuchinja.org kushanda? https://www.change.org/es
Kunyange zvakadaro une siginecha yangu. Kunyangwe chinhu chakanaka chingave chekuburitsa iwo maratidziro.
€ quimant akadaro
Heino vhidhiyo maitiro ekugadzira mafomu:
Pindura ku € quimant
Usafunge kuti mamiriro ezvinhu aya anongotambura muGNU / Linux, kwete changamire ... AMD mifananidzo ine simba rakanyanya ... (izvi kana madhiraivha achiwanzoshanda), asi dambudziko (uye izvi zvisinei nehurongwa hwekushandisa huri kutaurwa) , ndezvekuti vatyairi vayo idambudziko rakazara, muOSX semuenzaniso inotambura nekuita zvisirizvo saka vakasarudza mifananidzo yeNvidia, muWindows chaimo umo iyo AMD inofanirwa kushanda zvisina mhosho ine maburi ayo. Semuenzaniso munharaunda yeHackintosh yemakadhi eADD ndiwo musoro mukuru kunze uko.
Kune yangu chikamu, iwe une rutsigiro rwangu maererano nemasaini, asi kwandiri makadhi emifananidzo e AMD haasisiri sarudzo mune zvese Linux neOSX.
Ini ndinowedzera chinongedzo chiri mubvunzo, kuti iwe ugone kusaina chikumbiro.
Ini ndinoshandisa nvidia asi ini ndichiri kuvatsigira
Iniwo ndinobatana nechikonzero. Sezvo ivo vakaisa iyo peji kuunganidza masiginecha, taura pano pablog uye wese wandinoziva foramu inobata neGNU / Linux iyo inotangisa danho kuti vawedzere zvimwe, asi zvingave zvakanaka kana ikasanganisira Nvidia futi, iwo Madhiraivha zvine chinetso kunyangwe ndichifunga kwete zvakanyanya seATI.
Pindura kune choanm
Ini pachangu, ndinoda Nvidia, AMD / ATI haisi yangu yekuda
Ready ... Ini ndatoita echo mublog rangu uye google +
Rangarira kumutsiridza musuwo mukuru, kuitira kuti munhu wese apinde munzvimbo iyi uye kuti zvirege kupatsanurwa.
Yakagadzirira ... iyo yakatsikiswazve uye kudiridzwa nenzira dzese yakatoitwa
Zvakare paFacebook neTwitter
Ini ndatosaina uye mudzimai wangu zvakare 😉 Dai ichi chikumbiro chive chinobudirira
Ini ndatoenderera kusaina, vakandipa makore mashoma apfuura iyo laptop yandinayo, uye iine ATI, ine chikamu chematambudziko akajairwa nevatyairi ava, ikozvino zvinoitika kuti iyo HD3470 inova iyo yangu laptop ane, pamwe nemadhiraivha aya, ndeVamiswa, isu tichava nyadzi.
Ini ndinosaina nekuda kwechikonzero.
Ini handichatengi chero AMD kana ATI.
Pindura kune vanodhakwa
Chasainwa. Ndine michina miviri yedesktop (4570 na5770) uye kabhuku kekuverenga (4250) uye mashandiro acho ari mashoma muLinux, zvekuti padesktop 4250 inogona kuita zvinopfuura iyo 5770, zvirinani kwandiri ...
Ini zvakare ndine radeon hd 3000 nhevedzano uye ndinobvuma, ndinovimba ndinogona kupa siginecha yangu xD ndine makore gumi nemashanu.
Tora mukana uno kuti utaure, ivo vachangobva kuburitsa vhezheni nyowani yeiyo nvidia (pamwe nekutenda kubuntu nevharuvhu) inoda kuvandudzwa mu linux, ndeapi madhiraivha ari nani? idzo dze ati kana dze nvidia?
Ndinovimba kuti vharafu neimwe kambani inobatana nechikonzero ichi inopa Amd iyo inosundira kusimudzira madhiraivha avo, sezvakaita Nvidia nemadhiraivha ayo achangoburwa, zvichave zvakakosha kuti vaone kana vachizadzisa kuita kunovimbiswa naNvidia, uko kwakakwirira zvakanyanya kune vatyairi vekare, ini handirangarire tsika asi chaive chinhu chekunakidzwa nezvacho.
Kana zvinhu zvikaenda sekuratidzwa kwenyaya idzi ... handifunge kuti vanozoisa ruoko rwakawanda mumadhiraivha eLinux Ivo vachakupa iwe pekutanga kwavanotengesa zvakanyanya.
Mashoko ndeechokwadi here?
Vhiki rino ndakaverenga nyaya nhau kubva ku AMD ichiti ivo vari kuzotarisa gore rese kune vatyairi uye kwete pakugadzira mhando nyowani.
Wakamboiverenga kupi, ndinoda kuverenga, zvirinani kuti ndive netariro 🙂
Thunar ichave neEyelashes!
Maitiro ekugadzira iyo SSH tunnel pakati peLinux server uye Windows mutengi